သင်ဟာ ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်ကားတစီးကို မောင်းနေတဲ့ ယာဉ်မောင်းသူတစ်ယောက်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်၊ ဒီဇယ်အင်ဂျင်ကားကို မောင်းနေတဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်ရင်ဖြစ်ပါမယ်။ သင့်ကားဆီဖြည့်စဉ်မှာ ဆီဆိုင်က ဓာတ်ဆီကားကို ဒီဇယ်မှားထည့်လိုက်မိတယ်၊ ဒီဇယ်ကားကို ဓာတ်ဆီမှားထည့်လိုက်မိတယ် ဆိုပါစို့ ( ဖြစ်ခဲပေမယ့် ဖြစ်တော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်)။ သင်ကလည်း အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့ ဆီမှားထည့်လိုက်တာမသိဘဲ ကားစက်နှိုးလိုက်မိတယ်ဆိုရင် သင်ကားအင်ဂျင် ဘာတွေဖြစ်သွားနိုင်မလဲဆိုတာကို သိပ္ပံနည်းကျ လက်တွေ့ကျကျ ဆွေးနွေးတင်ပြချင်ပါတယ်။
ဆီမှားထည့်တဲ့ပြဿနာ ဘာတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုမသိခင် ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်နဲ့ ဒီဇယ်အင်ဂျင်တို့ရဲ့ မတူကွဲပြားတဲ့ အင်ဂျင်တည်ဆောက်ပုံ၊ မီးလောင်ပုံလေးတွေကို သိထားရင်ပိုကောင်းတာပေါ့။
မော်တော်ယာဉ်တစ်စီး တစ်နေရာကနေ တစ်နေရာသို့ ရွေ့လျားသွားဖို့ အဓိကစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ပေးတဲ့အရာဟာ အင်ဂျင်ပါ ။ အဲ့ဒီလို စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ပေးဖို့ မော်တော်ကားတွေမှာ thermal engine ဆိုတဲ့ အပူစွမ်းအင်သုံးအင်ဂျင်တွေကို အသုံးပြုကြပါတယ်။ ဓာတ်ဆီနဲ့ဒီဇယ်အင်ဂျင်တွေဟာ အပူစွမ်းအင်သုံးအင်ဂျင်တွေဖြစ်ပြီး အတွင်းပိုင်းမှာ မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်တဲ့ internal combustion engine အမျိုးအစားတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်နဲ့ ဒီဇယ်အင်ဂျင်တွေမှာ အခြေခံအင်ဂျင်အမျိုးအစားတူသော်လည်း ကွဲပြားခြားနားချက်များစွာရှိနေတာပါ။ ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်နဲ့ဒီဇယ်အင်ဂျင် တစ်ခုချင်းစီမှာ မတူကွဲပြားတဲ့ အားသာချက် အားနည်းချက်တွေ ရှိပါတယ်။
အခု ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိတဲ့ ကားတွေမှာ အသုံးပြုနေတဲ့ အင်ဂျင်တွေဟာ4Strokes (Intake , Compression , Power , Exhaust) ဆိုတဲ့ ပုံစံနဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့ အင်ဂျင်တွေဖြစ်ပါတယ်။ ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်နဲ့ဒီဇယ်အင်ဂျင်တွေမှာက မီးလောင်ပေါက်ကွဲပြီး ပါဝါရရှိပုံတွေ အဓိကကွဲပြားခြားနားတာပါ။
ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်တစ်လုံး မီးလောင်ပေါက်ကွဲပြီးပါဝါရရှိဖို့ အခြေခံအားဖြင့် ပစ်စတင် (Piston) အောက်ဖက်ကိုအဆင်းမှာ ဓာတ်ဆီနဲ့လေကိုရောနှောကာ အင်ဂျင်ထဲကို inlet ပေါက်ကနေဆွဲပြီး ထည့်သွင်းပါတယ်။ အဲ့ဒါကို intake stroke လို့ခေါ်တာပါ။ ပြီးနောက် ပစ်စတင်ကနေ အဲ့ဒီ ဝင်ရောက်လာတဲ့ ဓာတ်ဆီနဲ့လေတွေကို ဖိသိပ်ပါတယ်။ ဒါဟာ compression stroke ပါ။ အဲ့ဒီလို ဖိသိပ်လိုက်တဲ့ဖိအား pressure ကြောင့် အင်ဂျင်ထဲရောက်နေတဲ့ ဓာတ်ဆီနဲ့လေတွေဟာ အပူချိန်မြင့်တက်လာပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ spark plug ကနေမီးထွက်စေပြီး မီးလောင်ပေါက်ကွဲကာ စွမ်းအင်ပါဝါကို ရရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါကို power stroke လို့ခေါ်ကြတယ်။ အဲဒီလိုမီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် အင်ဂျင်အတွင်း အပူချိန်မြင့်တက်မှုနဲ့ ဖိအားမြင့်တက်မှုတို့ဟာ ဆလင်ဒါအတွင်းမှဖြစ်ပေါ်လာပြီး ပစ်စတင်ကိုအောက်သို့တဖန်တွန်းချခြင်းဖြင့် ကွန်နက်တင်း (connecting rod ) နဲ့ ကရိုင်း (crankshaft) တို့ကို လည်ပတ်စေပြီး မော်တော်ယာဉ်ကို ရွေ့လျားစေပါတယ် ။ ဓာတ်ဆီရယ်၊ လေရယ်၊ ပလပ် (spark plug) ရယ် ပေါင်းပြီးမှ မီးလောင်ပေါက်ကွဲကာ ပါဝါစွမ်းအင်ကို ရရှိခြင်းဖြစ်တာကြောင့် ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်တွေရဲ့ မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုလမ်းစဉ်ကို ပုံမှန်မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ် (regular combustion) လို့ခေါ်ကြတာပါ။
ဒီဇယ်အင်ဂျင်မှာတော့ ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်မှာလို ပလပ် မပါဝင်ပါဘူး။ ဒီဇယ်အင်ဂျင်ရဲ့ မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်ကတော့ ဆလင်ဒါအတွင်းမှာရှိတဲ့ လေတစ်မျိုးတည်းကို အလွန်ကြီးမားတဲ့ ဖိအားနဲ့ ဖိသိပ်ပြီး၊ အဲဒီလို ဖိသိပ်ခြင်းကြောင့် အပူချိန်မြင့်တက်နေတဲ့လေအတွင်း ဒီဇယ်ကို fuel injector ကနေတဆင့် အမှုန်အမွှားလေးတွေဖြန်းပေးခြင်းဖြင့် မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုကိုဖြစ်စေပြီး ပါဝါကို ရရှိစေတာပါ။ တနည်းဆိုရရင် ဒီဇယ်အင်ဂျင်ဟာ ဖိသိပ်ထားတဲ့လေရဲ့ အပူချိန်နဲ့ မီးလောင်ကျွမ်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စေတယ်လို့ ဆိုရပါမယ်။ ဒါကြောင့် ဒီဇယ်အင်ဂျင်မှာ မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စေဖို့ အပူချိန် 500 ံC သို့မဟုတ် 932ံF ကနေ ဒီထက်မြင့်မားတဲ့ အပူချိန်ဖြစ်အောင် ဖိနှိပ်ပေးရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီဇယ်အင်ဂျင်
ဟာ မီးလောင်မှုဖြစ်စဉ် (fire triangle) ဖြစ်စေတဲ့ လေ၊ လောင်စာဆီ၊ မီးစတင်ဖြစ်မှု (ignition) တွေမှာ မီးစတင်လောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်တဲ့ spark plug မပါဘဲ လေဖိအားနဲ့အပူချိန်ကိုသုံးပြီး မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်အောင်တည်ဆောက်ထားတာကြောင့် ဒီဇယ်အင်ဂျင်ရဲ့ မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်ကို ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ် (irregular combustion) လို့ခေါ်ကြတာပေါ့။
အကျဉ်းချုပ်ဆိုရရင်တော့ ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်မှာ ဆီနဲ့လေကို အင်ဂျင်ထဲထည့်ဖိသိပ်ပြီး ပလပ်ကနေ မီးပေါက်ကာ ပါဝါကိုရရှိတယ်လို့ဆိုရပါမယ်။
ဒီဇယ်အင်ဂျင်မှာတော့ လေတစ်မျိုးထဲကို ဖိကျစ်ထည့်ပြီး အပူချိန်မြင့်တက်အောင်လုပ်ကာ ဒီဇယ်ကို အင်ဂျက်တာကနေပန်းထည့်ပြီး မီးလောင်ပေါက်ကွဲစေကာ ပါဝါကိုရရှိတာပါ။
အခုဆက်လက် တင်ပြချင်တာက ဓာတ်ဆီနဲ့ဒီဇယ်ဆီတို့ရဲ့ မတူကွဲပြားတဲ့ ဂုဏ်သတ္တိတွေအကြောင်းပါ။
အငွေ့ပျံလွယ်သည်၊ ပုံမှန်အပူချိန်တွင် လွယ်ကူစွာ အငွေ့ပျံသည်။
မီးစတင်လောင်ကျွမ်းရန် အနိမ့်ဆုံးသော အပူချိန်လိုအပ်ချက် (flash point ) = -10 to -15 Cံ or 14 to 15 ံF
ဖိနှိပ်သောသိပ်သည်းဆ = 0.60 to 0.78
အပူချိန်ပမာဏ = 9500 to 10500 Kcal / Kg 0r 4300 to 4800 Kcal / lb
အေးနေသော အင်ဂျင်ကို စတင်နှိုးချိန်တွင် လေနှင့်ဆီရောနှောမှုလွယ်ကူစေရန် အလွယ်တကူ အငွေ့ပျံနိုင်စွမ်းရှိသည် ။
ဒီဇယ်ကို ရေနံစိမ်းမှ အပူချိန် 200 ံC – 300 ံC (104 to 212 ံF) ၌ချက်ယူရရှိသည်။
ဒီဇယ်သည် ရေနံဆီ ဓာတ်ဆီတို့ထက် နောက်ကျပေါင်းခံထားသော လောင်စာဆီဖြစ်သည်။
မီးစတင်လောင်ကျွမ်းရန် အနိမ့်ဆုံး အပူချိန်လိုအပ်ချက် (flash point) မှာမြင့်မားပြီး 40 to 100 ံC or 104 to 212 ံF ဖြစ်ပြီး သိပ်သည်းဆမှာ 0.82 to 0.86 ဖြစ်သည်။
အပူချိန်ပမာဏ အနီးစပ်ဆုံး 10500 ' Kcal / Kg or 4800 Kcal / lb ရှိပြီး နိမ့်သောအပူချိန်တွင် အရည်အဖြစ်တည်ရှိနေမည်။
ဒီဇယ်သည် အင်ဂျက်ရှင်းပန့် (injection pump) နှင့် နော်ဇယ် (nozzle) များအတွင်း ချောဆီအဖြစ် ဆောက်ရွက်ရသဖြင့် စေးပျစ်ပြီး ချောဆီဂုဏ်သတ္တိရှိရမည်။
ဆီနှစ်မျိုးရဲ့ မတူညီတဲ့ ဂုဏ်သတ္တိနှစ်ခုကို သိပြီဆိုရင် အခုဓာတ်ဆီအင်ဂျင်ထဲကို ဒီဇယ်ဆီမှားထည့်ကြည့်ပါမယ်။
ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်ထဲကို ဒီဇယ်ဆီထည့်ပြီး စက်နိုးလိုက်ရင် ဘာဖြစ်မလဲ?
အဖြေကတော့ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ သင့်ကားအင်ဂျင် စက်နှိုးလာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ စနစ်တကျပြန်ရှင်းပြပါမယ်။
ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်မီးလောင်ပေါက်ကွဲပုံက ဓာတ်ဆီနဲ့လေ အရောအနှောတွေကို အင်ဂျင်ထဲထည့် ဖိသိပ်ပြီး ပလက်ကနေမီးပေါက်ပေးကာ မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုကိုဖြစ်စေတာပါ။ ဒီလိုအင်ဂျင်လည်ပတ်မှုဖြစ်စဉ်ဖြစ်စေဖို့ ဓာတ်ဆီကိုက သူ့ဂုဏ်သတ္တိအရ လေနဲ့ရောနှောရင် အဆင်ပြေစေဖို့ အငွေ့ပျံလွယ်တဲ့ စွမ်းရည်သတ္တိရှိပါတယ်။ ဒီလိုအင်ဂျင်ထဲကို အငွေ့ပျံမလွယ်တဲ့ ဒီဇယ်ထည့်လိုက်တဲ့အခါ ဒီဇယ်
ဟာ အငွေ့မပျံဘဲ အရည်တွေအဖြစ်နဲ့ပဲဆက်ရှိနေလို့ လေနဲ့အရောအနှောမှာ ပေါက်ကွဲမီး
လောင်စေဖို့ ဘယ်လိုမှမလွယ်ကူစေပါဘူး။ နောက်တစ်ချက်က ဓာတ်ဆီရဲ့ မီးလောင်လွယ်နိုင်စွမ်းပမာဏက မြင့်မားပြီးသားမို့ အင်ဂျင်တည်ဆောက်ပုံကိုက အပူချိန်များစေတဲ့ တမင်ဖိနှိပ်မှုတွေမပါဝင်ပါဘူး။ ဒီတော့ ဒီလိုအင်ဂျင်ထဲမှာ မီးလောင်မလွယ်နိုင်တဲ့ ဒီဇယ်ဆီဟာ မီးလောင်ဖို့လိုအပ်တဲ့အပူချိန်မရရှိလို့ မီးလောင်ကျွမ်းဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
ဒီတော့ ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်ထဲ ဒီဇယ်ထည့်မိပြီး စက်နှိုးလိုက်ရင် ဘာမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဓာတ်ဆီကားမောင်းသူတွေ ကံကောင်းပါတယ်။ မတော်မှားထည့်မိရင် စက်နှိုးမရတာကလွဲပြီး အင်ဂျင်မထိခိုက်ဘဲ
ဆီတိုင်ကီထဲက၊ ပိုက်လိုင်းတွေထဲက မှားထည့်မိတဲ့ ဒီဇယ်တွေကို ကုန်အောင်ထုတ် ဓာတ်ဆီပြန်ထည့်လိုက်ရုံနဲ့ မောင်းလို.ရပါတယ် ။ ကဲဓာတ်ဆီအင်ဂျင်ပြီးတော့ ဒီဇယ်အင်ဂျင်အလှည့်ပေါ့ ။
ဒီဇယ်အင်ဂျင်ထဲကို ဓာတ်ဆီမှားထည့်ပြီး စက်နှိုးမောင်းမိရင် ဘာဖြစ်မလဲ?
အဖြေက ခေတ်စကားနဲ့ပြောရရင် မြွေခြောက်ကိုက်သလိုပါပဲဗျ။ အင်ဂျင်ရယ် ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေရယ် အကုန်ဂန့်သွားနိုင်ပါတယ်။ စနစ်တကျပြန်ရှင်းပြပါမယ်။
ဒီဇယ်အင်ဂျင်မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်က အပေါ်မှာပြောခဲ့သလို လေတမျိုးထဲကိုသာ inlet ကနေ သွင်း၊ အဲဒီလေကိုပဲ အပူချိန်အများကြီးရအောင် piston ဖိအားတွေနဲ့အတင်းဖိသိပ်၊ တော်ရုံမီးမလောင်နိုင်တဲ့ ဒီဇယ်ဆီတွေမီးလောင်လောက်တဲ့ လေအပူချိန်ရောက်ပြီဆိုမှ နော်ဇယ်ကနေ သတ်မှတ်အတိုင်းအတာအတိုင်း အမှုန်အမွှားလေးတွေဖြန်းပေးခြင်းအားဖြင့်မီးလောင်စေတာပါ။ အဲဒီလိုအင်ဂျင်ထဲကို မီးလောင်လွယ်လွန်းတဲ့ ဓာတ်ဆီထည့်ပါပြီတဲ့။ အပူချိန် အနုတ်ဒီဂရီမှာတောင်မီးလောင်နိုင်တဲ့ ဓာတ်ဆီဟာ မလောင်လောင်အောင် အပူချိန်နဲ့ဖိအားတွေပေးထာတဲ့ အင်ဂျင်ထဲမှာ စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့၊ အထိန်းမဲ့အကွပ်မဲ့ မီးလောင်ကျွမ်းမှု (uncontrolled combustion) ဖြစ်ပါတော့တယ်။ အဲဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက် အင်ဂျင်သံမီးလောင်မှုကို နားမထောင်တဲ့ ယာဉ်မောင်းနဲ့ဆိုရင် သတိမမူမိဘဲ အချိန်အတော်ကြာမောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ပဲ အင်ဂျင်အတွင်းက မီးလောင်ခန်းသုံး ပစ္စည်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ piston ၊ valve ၊ cylinder Head ၊ camshaft အစရှိတဲ့ ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေအကုန်ပျက်စီးပါမယ်၊ ဝပ်ရှော့ပို့ပြီး အင်ဂျင်ချရပါမယ် ။ အတွင်းပစ္စည်းတွေအကုန်ပြုပြင်လဲလည်ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါတွင်ပဲလားဆို တော့ မဟုတ်သေးပါဘူး။ ဒီဇယ်အင်ဂျင်မှာ သုံးနေတဲ့ နော်ဇယ်တွေ အင်ဂျက်ရှင်းပန့်တွေဟာ ဒီဇယ်ရဲ့ စေးပျစ်မှု ချောဆီသဘောကို မှီခိုပြီးရပ်တည်နေကြတာပါ။ အဲဒီလိုပစ္စည်းတွေထဲကို စေးပျစ်မှုမရှိတဲ့ ဓာတ်ဆီထည့် လည်ပတ်လိုက်တဲ့အတွက် ချောဆီစနစ်ပျက်စီးသွားပြီး နော်ဇယ်တွေ၊ အင်ဂျက်ရှင်းတွေပါ အပိုလိုက်ပျက်စီးမှာပါ။ တခြား ရာဘာစီး (rubber seal) တွေမှာလည်း ဓာတ်ဆီဟာပျော်ဝင်ကုန်တာမလို့ အင်ဂျင်တစ်ခုလုံး ပျက်စီးမှုမျိုးစုံနဲ့ ကြုံတွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဇယ်အင်ဂျင်ယာဉ်မောင်းဆရာတွေ သတိပြုကြပါ။ ဓာတ်ဆီမှားမထည့်မိဖို့ရယ်၊ မှားထည့်မိရင်တောင် စက်နှိုးပြီးပြီးချင်းသိပြီး အချိန်မီ အခြေအနေမဆိုးခင်ရပ်တန့်ဖို့ရယ်ပါ။
ဒီလောက်ဆို ဆီမှားထည့်တဲ့ ပြဿနာကနေ အင်ဂျင်တွေဘာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာ ကွဲကွဲပြားပြားသိလောက်ပါပြီ။
နောက်ဆုံး သတိပေးချင်တာကတော့ ဒီဇယ်အင်ဂျင်ထဲ ဓာတ်ဆီ လုံးဝ (လုံးဝ) ထည့်မမောင်း မိပါစေနဲ့ဗျာ။
စာဖတ်သူမိတ်ဆွေများအားလုံး နည်းပညာဗဟုသုတ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ကြပါစေ။
စာရေးသူ – Lynn Za Nee (P.T.U)